China Lightall okungabonakali LED Khombisa ifektri abakhiqizi | Szlightall
Ukukhanya kwe-Lightall okungabonakali kwe-LED
Ukuboniswa okungabonakali kwe-LED kuhle ukuhlobisa, ukwakhiwa kokuqamba nokusetshenziswa kokukhangisa, kusebenza ngokufana nesikrini esivamile se-LED, esifanele kakhulu udonga lwangaphakathi lwengilazi. Ukugqwayiza kwayo kwe-3D kuzoletha umuzwa obukekayo nocacile, futhi abantu babona ngengilazi ngaphandle kokuvimba ukubona.
1.Shopping Mall okungabonakali Indoor Outdoor Iwindi Glass Khombisa Led
Isibonisi esiholelekile sobuchwepheshe, khanyisa iwindi lakho.
Ukubonakala okuphezulu okuphezulu kunamazinga angaphezu kuka-75% obala ngaphambili nangemuva.
Abantu bangabona ividiyo nezithombe ngengilazi ngokucacile ngaphandle kokubona okuvimba.
Ukukhanya okukhulu, iphaneli ngalinye eliholelekile lizungeze i-7kg
Lawula nge-3G, 4G, USB ne-HDMI.
Ifezekisa ukuthumela ividiyo nesithombe nge-APP enesiphetho esihlakaniphile.
Izinga lokungena manzi le-IP65
Setshenziselwa kabanzi ngaphakathi nangaphandle
Ukufakwa okulula nokugcinwa
Awudingi noma iyiphi insimbi, gcina isikhathi nezindleko zokufaka, efanelekile ngokuphelele ukufakwa okungaguquki noma okuqashisayo.
Iphrojekthi yokufaka ekubonisweni kwesayithi
Ukukhanya kwesikrini okusobala kungokwesikhungo sengilazi sodonga, inxanxathela yezitolo, isitolo somkhiqizo, isitolo se-4S, isitolo sobucwebe, isikhumulo sezindiza, imibukiso, imibukiso yemfashini, njll.
Lolu lwazi lwenzelwe inkomba yakho kuphela ngenxa yokumiswa okuhlukile nemingcele yemikhiqizo.
Imikhiqizo uchungechunge P3.91
Iphikseli iphimbo 3.91-7.81mm
Usayizi weKhabhinethi 1000 * 500mm
Module Usayizi 500 * 250mm
Imodi yeDrayivu 1/7 ukuskena
Isisindo seKhabinethi 7kg
Ibanga lokubuka elihamba phambili 3m-50m
Buka i-engela H: 120 °, V: 120 °
Isilinganiso sokuvuselela 3840Hz
Ukufaka Amandla AC110V / 220V, 60Hz
Isilinganiso sokuvuselela -30 ℃ ～ + 70 ℃
Umswakama osebenzayo 10 ～ 90% RH
Iwaranti 3 Iminyaka
Isikhathi sokuphila ≧ amahora ayi-1000000
Indlela Yokulawula NOVASTAR, LINSN, COLORLIGHT
Isistimu Esebenzayo I-Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10
Isitifiketi I-CE, i-ROHS, i-FCC
Langaphambilini Isibonisi se-Lightall Outdoor LED
Olandelayo: I-Lightall Rental LED Khombisa i-500x1000mm Series
Isibonisi se-Lightall Poster LED
Isibonisi se-Lightall Indoor Fixed LED
I-LIGHTALL Indoor HD LED Video Wall Display